Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Suldaan Cabdiraxmaan Duulane oo beeniyey wararka laga faadiyay
Suldaan Cabdiraxmaan Duulane oo beeniyey wararka laga faadiyay
October 21, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Suldaan Cabdiraxmaan Duulane oo ah oday dhaqameed kasoo jeeda deegaanka gaar ahaan gobolka Wardheer ayaa si kulul uga jawaabey qoraalo been abuur ah oo laga faafiyey isagoo ku tilmaamay iney yihiin wararkaasi been aan sal iyo raad toona lahayn.
Suldaanka oo hadda kusugan magaakada Nairobi ayaa warbaahinta Xaajo usheegey in socdaalkiisa uu Nairobi ku yimid uu yahay mid la xiriira xanuun iyo arimo caafimaad uuna ku laaban doono caasimadda Jijiga iyo deegaankiiba.
Qaar kamid ah warbaahinta taageerta kooxda Maxamed Cumar ayaa faafisey in Suldaanku kasoo cararay deegaanka middaas oo uu Suldaanku ku tilmaamay mid been ah oo aan sal iyo raadtoona lahayn.
” Adeer ma rabin inaan ka jawaabo beentaas la iga faafiyay balse haddii laga aamusana dad badan oo wax ma garato ah ayaa run umalayn. Sidaas darteed aniga wax dhibey iyo waxaan uga soo tagay waddankii ma jiro. Isbitaal ayaan u imid haddana laba jeer ayaa la iqalay Insha Allahuna waan laaban doonaa” ayuu Suldaanku yidhi.Suldaanka oo Warbaahinta Xaajo ay khadka Telka kala xiriirtey ayaa uga xumaadey arintan laga faafiyay isagoo sheegey in beentaasi ay tahay mid caado noqotay oo aan laga xishoonin.